Haweenka ajnabiga iyo amaahda mikrolån - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Invandrare kvinnor och mikrolån
Haweenka ajnabiga iyo amaahda mikrolån
La daabacay fredag 11 september 2009 kl 11.46
Amaahda mikrolån iyo dumarka ajnabiga ah Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX
Wasiiradda manaafacaadka dalkan Maud Olofsson ayaa maanta magaalada Karineholm ka furtay machadka maalgelinta Mikro barnaamij loogu magac daray amaahda mikrolån taasoo fursadu siineysa in haweenka ajnabiga ah ka faa’iideystaan si ay u abuurtaan meherado u gaar ah.
Sidoo kale EU-da ayaa iyadana barnaamijkan ku taagereysa dhaqaale gaaraya 3,5 miljan oo karoonka swidhish-ka ah, sodoo kale bankiga sparbank ayaa isagana lacag raasmaal ah ku biirin doona 5 malyan oo karoonka ah.
”Hanaanka lugu qaadanayo lacagtaasi mirkolån ayaa meelo badan oo dunida kamid ah laga isticmaala, waana mid loogu daneynayo haweenka doonaya iney sameystaan meherado u gaar ah, dalkana waa ka jira” sidaasi waxaa tiri joyce Kimwanga Lundin oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Tansaniya arrimahana qibrad u leh.
Dalkan Sweden waxaa jira haween badan oo ajanabi ah kuwaasoo aysan suuragal u noqon iney suuqa shaqada ka dhex muuqdaan islamarkaasina aan awoodin in banki ka amaahdaan wax lacag ah.
Shabakada la yiraahdo Entreprenörer oo ah shabakad ay ku jiraan dadka laga tirada badan marka magaceeda la soo gaabsho loo yaqaano NEEM, ayaa mashruuca howshan lugu fulinayo ay heshay adduun gaaraya 3,5 malyan oo karoonka Swedhish-ka ah si loo dar dargeliyo howshan.